Realme X2 Pro ၏လျင်မြန်သောအားသွင်းမှုသည် (၆၅) W မဟုတ်ဘဲ (၅၀) ဝပ်ဖြစ်သည် Androidsis
Realme X2 Pro ၏လျင်မြန်သောအားသွင်းမှုသည် (၆၅) W ထက် ၅၀ ဝပ်သာဖြစ်သည်
ကျနော်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များထဲကတစ်ခုအပေါ်အသစ်တစ်ခုကို update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် Realme X2 Pro ကို အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဖုန်းဘက်ထရီကသုံးမယ့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းဖို့အတွက်အထောက်အပံ့နဲ့ပါ။
ကျနော်တို့အရင်ကဒီ flagship နှင့်အတူ loaded လိမ့်မည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် 65 watt အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းထောက်ခံမှုကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးဖြစ်ပြီး Oppo ကမကြာမီကကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်သည်တရားဝင်ဖြစ်ဟန်ရှိသည် ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏တရားဝင်ဥရောပတွစ်တာအကောင့်မှတဆင့်၎င်းသည် ၅၀ ဝပ်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်.
ရေတွက်ကြည့်ပါ ဥရောပတိုက် သောအရိပ်အမြွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ Realme X2 Pro ကို ၃၅ မိနစ်အတွင်းတွင် ၀% မှ ၁၀၀% အထိအားပြည့်ပါလိမ့်မည်, အရာတော်တော်လေးအထင်ကြီးစရာပါပဲ။ သို့သော်မိုဘိုင်းဘက်ထရီမည်မျှ mAh ပမာဏမည်မျှရှိသည်ကိုမသိရှိရသေးသော်လည်း၎င်းသည် ၄၀၀၀ mAh ထက်မနည်းကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
me realme X2 Pro ဖြင့်၎င်း၏ 50W SuperVOOC Flash Charge ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဥရောပမှာအမြန်ဆုံးအားသွင်း
နောက်ထပ်အင်ဖို: https://t.co/a2vwKm3xcf#FullSpeedFlagship # realmeX2Pro pic.twitter.com/nfs6vmFy0m
- realme ဥရောပ (@realmeeurope) အောက်တိုဘာလ 3, 2019
အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြှင့်တင်ခြင်းဟုခေါ်သည် SuperVOOC Flash Charge ပါပါတယ် ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုတူ၏အဆိုအရဥရောပ၌အမြန်ဆုံးဖြစ်သော ၅၀ ဝပ်သည်မြန်နှုန်းကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤတိုးတက်မှုအသစ်အပေါ် အခြေခံ၍ Oppo Reno Ace သည် 50W SuperVOOC 2.0 Flash Charge နည်းပညာဖြင့်လာမည့်အတည်ပြုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။
Realme X2 Pro တွင်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုလူသိများပြီးဖြစ်သည် Snapdragon 855 Plus အား အဆိုပါပါးပျဉ်းအောက်မှာ Qualcomm မှတစ် ဦး 64 MP အဓိကကင်မရာပါ ၀ င်သည့်နောက်ဘက်ကင်မရာစနစ်, 115 °မြင်ကွင်းကိုမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူတစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထောင့်မှန်ဘီလူး, တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူးနှင့်ပုံတူမှန်ဘီလူး။ ၎င်းတွင် 20X hybrid zoom လည်းရှိပြီး makro ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ဒီမော်ဒယ်၏အရေးကြီးဆုံးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ၎င်းဖြစ်သည် 90H နာရီနှုန်းကို refresh မှုနှုန်းနှင့်အတူပြသz.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Realme X2 Pro ၏လျင်မြန်သောအားသွင်းမှုသည် (၆၅) W ထက် ၅၀ ဝပ်သာဖြစ်သည်
လျင်မြန်သောဂိမ်းများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်း Fly Sky High တွင်မြင့်တက်စွာပျံသန်းပါ